ट्याग: गुगल सार्वभौमिक एनालिटिक्स | Martech Zone
ट्याग: गुगल सार्वभौमिक एनालिटिक्स
आइतबार, अक्टोबर 19, 2014 आइतबार, अक्टोबर 19, 2014 Douglas Karr
ओह, ती सबै उपकरणहरूमा गुगलमा ती स्मार्टहरू! गत हप्ता, एक ग्राहकसँग उनीहरूको गुगल एनालाइटिक्स ट्र्याकिंगमा केहि मुद्दाहरू थिए, भिजिटनहरूलाई खण्डन गर्ने कोशिस गर्दै जुन लगइन नभएकामा लग ईन भएका थिए। केन्द्रीय समस्या निवारण सही घटनाहरू सुनिश्चित गर्दै थियो र डाटा गुगलमा हस्तान्तरण भइरहेको थियो। गुगल क्रोमको डेभलपर उपकरणमा नेटवर्क ट्याबको प्रयोग गरेर कसरी समस्या निवारण गर्ने भन्ने कुरा मैले उनलाई देखाँए। यो सप्ताहअन्तमा, उसले मलाई एक राम्रो देखायो ...
यस प्रश्नलाई अब बाटोबाट बाहिर निकालौं। के तपाईले गुगलको नयाँ युनिभर्सल एनालिटिक्स अपग्रेड गर्नु पर्छ? हो वास्तवमा, तपाई सम्भवतः पहिले नै युनिभर्सल एनालिटिक्समा अपग्रेड गरिएको छ। तर, किनभने गुगलले तपाईंको लागि तपाईंको खाता अपडेट गर्‍यो, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले अरू केहि गर्नुपर्दैन वा तपाईं नयाँ युनिभर्सल एनालिटिक्स खाताबाट अधिक फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले, गुगल युनिभर्सल एनालिटिक्स यसको रोलआउटको तेस्रो चरणमा छ।